၂၀၁၈ မှာ Huawei ကနေ ဘာဖုန်းတွေထွက်ရှိလာနိုင်မလဲ? – DigitalTimes.com.mm
787 Shares 212 Views
Huawei ကနေ Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တေါကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် အခုလာမယ့် ၂၇ရက်နေ့မှာ P20 ဖုန်းစီးရီးတွေကိုမိတ်ဆက်တော့မှာပါ။ သူတို့တွေအပြင် ၂၀၁၈ မှာ Huawei ကနေ တခြားသောဖုန်းတွေလည်း ထွက်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်က တရုတ်ဆိုရှယ်ဝဘ်ဆိုဒ် Weibo မှာ တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် Huawei က ထွက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဖုန်းစာရင်းကို screenshot နဲ့တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
P စီးရီးဖုန်းတွေလိုပဲ Mate 11 ဆိုတာကိုကျော်ပြီး နောက်လာမယ့် Mate flagship ဖုန်းတွေကို Mate 20 လို့နာမည်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုတော့ Kirin 980, 12MP + 20MP rear camera, 8MP ရှေ့ကင်မရာ၊ RAM 4GB/6GB, storage 64GB/128GB တွေသုံးထားမှာပါ။
ကွာသွားမှာက display ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Mate 20 မှာ 5.9-inch 2K display, Mate 20 Pro မှာတော့ low-res 6-inch 1080p display တွေကိုသုံးထားမှာပါ။ Pro ဗားရှင်းမှာ display quality နိမ့်နေလို့အံ့သြကောင်းအံ့သြပါလိမ့်မယ်။ Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တို့တုန်းကလဲ ဒီလိုပါပဲ။
ဈေးနှုန်းကတော့ Mate 20 အတွက် တရုတ်ယွမ် ၃၈၉၉ ၊ Mate 20 Pro အတွက် တရုတ်ယွမ် ၄၈၉၉ နဲ့အောက်တိုဘာလမှာမိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။
Honor 10/ Honor 10 Lite
Honor brand ခွဲကတော့ အရည်အသွေးမြင့်ဖုန်းတွေကို ဈေးနှုန်းသင့်သင့်နဲ့ရောင်းချပေးလို့နာမည်ကြီးလာတာပါ။ Honor 10 ကိုတော့ ဇွန်လမှာမိတ်ဆက်လာနိုင်ပြီး 5.7-inch 1080p display, Kirin 970 CPU, RAM 4GB/ 6GB, storage 64GB/128GB, နောက်ကင်မရာ 12MP+20MP, ရှေ့ကင်မရာ 8MP ဖြစ်မှာပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ တရုတ်ယွမ် ၂၂၉၉ ကျသင့်မှာပါ။ Honor 10 Lite ကတော့ ဒီဇင်ဘာမှာထွက်လာနိုင်ပြီး display တူတူကိုမှ Kirin 670 processor သုံးထားမှာပါ။ နေရှ့နဲ့နောက် dual-camera တွေဖြစ်ပြီး RAM 3GB/4GB, ဈေးနှုန်းကောတ့ တရုတ်ယွမ် ၁၂၉၉ ပါ။
Nova2Lite/ Nova 3/ Nova 3S
ဒီနှစ် Nova စီးရီးတွေမှာဝင်လာနိုင်တာကတော့ Nova2Lite ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ Kirin 670 တွေကိုပထမဆုံးသုံးမယ့်ဖုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 5.6-inch 1080p display, RAM 4GB/ storage 64GB အတွက် တရုတ်ယွမ် ၁၉၉၉၊ RAM 6GB/ 64GB အတွက် တရုတ်ယွမ် ၂၂၉၉ ကျသင့်မှာပါ။မတ်လမှာထွက်လာမယ်လို့တော့ မှန်းထားပါတယ်။
Nova3တွေမှာတော့ spec တွေပိုမြှင့်ထားပြီး 6-inch 1080p display, Kirin 960 processor, ရှေ့နဲ့နောက် dual-camera, RAM 6GB, storage 256GB ပါ။ Nova 3S ကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလမှာမိတ်ဆက်လာနိုင်ပြီး ပိုတောက်ပတဲ့ 1200p display, Kirin 970 processor တွေကလွဲရင် ကျန်တဲ့ specs တွေကတော့ အတူတူပဲဖြစ်မှာပါ။
Enjoy 8 Plus, Enjoy 8, Enjoy 8S
Huawei ရဲ့ Enjoy စီးရီးသစ်တွေကတေ့ ဒီနှစ် ဧပြီမှာထွက်လာနိုင်တယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။ Enjoy 8 Plus မှာ Kirin 670 processor တွေကိုသုံးထားမှာဖြစ်ပြိး 6-inch display, 13MP+2MP နောက်ကင်မရာ၊ 8MP ရှေ့ကင်မရာတွေရှိပါတယ်။ Enjoy 8 ကတော့ ဇူလိုင်လမှာပဲဆက်ထွက်လာနိုင်ပြီး Kirin 670 ကိုပဲသုံးထားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်5.5-inch ဖြစ်ပြီး 720p နောက်ကင်မရာ 12MP တစ်လုံးတည်းသုံးထားမှာပါ။
Enjoy 8S ကတော့ ၂၀၁၈ ကုန်ခါနီးလောက်မှ ထွက်လာနိုင်ပြီး Kirin 670, 5.7-inch 1080 display တွေကိုသုံးထားပါမယ်။ ကျောဘက် dual-camera တွေဖြစ်ပြီး RAM 2GB/ 3GB, ဈေးနှုန်းကတော့ တရုတ်ယွမ် 1099 ဖြစ်မှာပါ။
ဒီထွက်လာမယ့်စီးရီးတွေအားလုံးထဲက ဖုန်းတစ်လုံးကများ သင့်အကြိုက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်???
Huawei ကနေ Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တေါကိုမိတျဆကျလိုကျပွီးတဲ့နောကျ အခုလာမယျ့ ၂၇ရကျနမှေ့ာ P20 ဖုနျးစီးရီးတှကေိုမိတျဆကျတော့မှာပါ။ သူတို့တှအေပွငျ ၂၀၁၈ မှာ Huawei ကနေ တခွားသောဖုနျးတှလေညျး ထှကျလာနိုငျပါသေးတယျ။
အရငျတဈခေါကျက တရုတျဆိုရှယျဝဘျဆိုဒျ Weibo မှာ တဈနှဈတာလုံးအတှကျ Huawei က ထှကျဖို့စီစဉျထားတဲ့ဖုနျးစာရငျးကို screenshot နဲ့တငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
P စီးရီးဖုနျးတှလေိုပဲ Mate 11 ဆိုတာကိုကြျောပွီး နောကျလာမယျ့ Mate flagship ဖုနျးတှကေို Mate 20 လို့နာမညျပေးလာနိုငျပါတယျ။ သူတို့တှကေိုတော့ Kirin 980, 12MP + 20MP rear camera, 8MP ရှကေ့ငျမရာ၊ RAM 4GB/6GB, storage 64GB/128GB တှသေုံးထားမှာပါ။
ကှာသှားမှာက display ပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Mate 20 မှာ 5.9-inch 2K display, Mate 20 Pro မှာတော့ low-res 6-inch 1080p display တှကေိုသုံးထားမှာပါ။ Pro ဗားရှငျးမှာ display quality နိမျ့နလေို့အံ့သွကောငျးအံ့သွပါလိမျ့မယျ။ Mate 10 နဲ့ Mate 10 Pro တို့တုနျးကလဲ ဒီလိုပါပဲ။
ဈေးနှုနျးကတော့ Mate 20 အတှကျ တရုတျယှမျ ၃၈၉၉ ၊ Mate 20 Pro အတှကျ တရုတျယှမျ ၄၈၉၉ နဲ့အောကျတိုဘာလမှာမိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။
Honor brand ခှဲကတော့ အရညျအသှေးမွငျ့ဖုနျးတှကေို ဈေးနှုနျးသငျ့သငျ့နဲ့ရောငျးခပြေးလို့နာမညျကွီးလာတာပါ။ Honor 10 ကိုတော့ ဇှနျလမှာမိတျဆကျလာနိုငျပွီး 5.7-inch 1080p display, Kirin 970 CPU, RAM 4GB/ 6GB, storage 64GB/128GB, နောကျကငျမရာ 12MP+20MP, ရှကေ့ငျမရာ 8MP ဖွဈမှာပါ။ ဈေးနှုနျးကတော့ တရုတျယှမျ ၂၂၉၉ ကသြငျ့မှာပါ။ Honor 10 Lite ကတော့ ဒီဇငျဘာမှာထှကျလာနိုငျပွီး display တူတူကိုမှ Kirin 670 processor သုံးထားမှာပါ။ နရှေ့နဲ့နောကျ dual-camera တှဖွေဈပွီး RAM 3GB/4GB, ဈေးနှုနျးကောတ့ တရုတျယှမျ ၁၂၉၉ ပါ။
ဒီနှဈ Nova စီးရီးတှမှောဝငျလာနိုငျတာကတော့ Nova2Lite ဖွဈပွီး ကုမ်ပဏီရဲ့ Kirin 670 တှကေိုပထမဆုံးသုံးမယျ့ဖုနျးလညျးဖွဈပါတယျ။ 5.6-inch 1080p display, RAM 4GB/ storage 64GB အတှကျ တရုတျယှမျ ၁၉၉၉၊ RAM 6GB/ 64GB အတှကျ တရုတျယှမျ ၂၂၉၉ ကသြငျ့မှာပါ။မတျလမှာထှကျလာမယျလို့တော့ မှနျးထားပါတယျ။
Nova3တှမှောတော့ spec တှပေိုမွှငျ့ထားပွီး 6-inch 1080p display, Kirin 960 processor, ရှနေဲ့နောကျ dual-camera, RAM 6GB, storage 256GB ပါ။ Nova 3S ကိုတော့ ဒီဇငျဘာလမှာမိတျဆကျလာနိုငျပွီး ပိုတောကျပတဲ့ 1200p display, Kirin 970 processor တှကေလှဲရငျ ကနျြတဲ့ specs တှကေတော့ အတူတူပဲဖွဈမှာပါ။
Huawei ရဲ့ Enjoy စီးရီးသဈတှကေတေ့ ဒီနှဈ ဧပွီမှာထှကျလာနိုငျတယျလို့ သတငျးရထားပါတယျ။ Enjoy 8 Plus မှာ Kirin 670 processor တှကေိုသုံးထားမှာဖွဈပွိး 6-inch display, 13MP+2MP နောကျကငျမရာ၊ 8MP ရှကေ့ငျမရာတှရှေိပါတယျ။ Enjoy 8 ကတော့ ဇူလိုငျလမှာပဲဆကျထှကျလာနိုငျပွီး Kirin 670 ကိုပဲသုံးထားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့5.5-inch ဖွဈပွီး 720p နောကျကငျမရာ 12MP တဈလုံးတညျးသုံးထားမှာပါ။
Enjoy 8S ကတော့ ၂၀၁၈ ကုနျခါနီးလောကျမှ ထှကျလာနိုငျပွီး Kirin 670, 5.7-inch 1080 display တှကေိုသုံးထားပါမယျ။ ကြောဘကျ dual-camera တှဖွေဈပွီး RAM 2GB/ 3GB, ဈေးနှုနျးကတော့ တရုတျယှမျ 1099 ဖွဈမှာပါ။
ဒီထှကျလာမယျ့စီးရီးတှအေားလုံးထဲက ဖုနျးတဈလုံးကမြား သငျ့အကွိုကျဖွဈမှာပါလိမျ့???